बलिउडका यी ५ फिल्म जहाँ अभिनेत्रीले हस्तमैथुन गरे
असार १०, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ – हाम्रो समाजमा सेक्सको नाम लिने बित्तिकै सबैको बोली बन्द हुन्छ। किनकी यहाँ सेक्स एक यस्तो चीज हो जसको बारेमा कुरा गर्नु राम्रो मानिदैन्, अपाच्य हुन्छ र हामीले यौन शिक्षाको नाममा शायदै सिक्ने अवसर पाउँछौं। त्यस्तै सबैभन्दा बढी मुश्किल मानिन्छ महिलाहरुका यौन इच्छाका बारेमा कुरा गर्न। मानिसहरु महिलाका इच्छालाई खासै महत्व नदिएको समयमा बलिउडले भने यसबारेमा खुलेर कुरा गर्न उचित ठानेको छ।
हामी मध्ये धेरै जसोले हेट स्टोरी र मस्ती जस्ता फिल्महरु हेरेका छौं र मन पनि पराएका छौं र त्यस्तै यस्ता धेरै फिल्महरु छन् जहाँ हामी सबैले महिलालाई मास्टरबेसन यानी हस्तमैथुन गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यी फिल्महरुले केवल दुनियाँलाई महिलासँग सम्बन्धित सत्यता मात्र नबताएर महिलालाई पनि पुरुषहरु जति नै सेक्सको आवश्यकता पर्ने कुरा पुष्टि गरेको छ।
आज हामी तपाईलाई बताउने छौं बलिउडका ती फिल्महरुका बारेमा जसमा महिला अभिनेत्रीले हस्तमैथुन गरे –
करीना कपूरको कमब्याक फिल्म ‘वीरे दि वेडिंग’ मा स्वरा भास्करको कामको निकै चर्चा भयो। स्वराले यस फिल्ममा एक पियक्कड युवती साक्षीको भूमिका निभाएकी छिन्, जसको छोडपत्र हुने वाला छ। साक्षी आफ्नो पतिसँग खुशी थिईन र उनको पतिले उनलाई हस्तमैथुन गरेको देखेका थिए। जस पछि उनले साक्षीलाई ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गरेका थिए। स्वराले आफ्नो यस सिनको कारण धेरै ट्रोलको सामना गर्नु परेको थियो तर महिलाका सेक्सुअल इच्छाको विषय बारेमा पनि चर्चा हुन् सुरु भएको थियो।
• लस्ट स्टोरिज – कायरा आडवाणी र नेहा धूपिया
सलमान खानको ‘रेस ३’ सँगै १५ जुनमा रिलिज भएको फिल्म ‘लस्ट स्टोरिज’ मा पनि सेक्सको बारेमा कुरा गरिएको छ। नेटफ्लिक्समा रिलिज भएको यस शर्ट फिल्मको सिरिजमा करण जोहरद्वारा बनाईएको कायरा आडवाणी, विक्की कौशल र नेहा धूपिया स्टारर फिल्ममा पनि हस्तमैथुन सिन छ। यस फिल्ममा एक मात्र नभई दुई हस्तमैथुनको सिन रहेको छ। यस फिल्ममा तपाईले कायरा र नेहालाई हस्तमैथुन गरेको देख्न सक्नुहुन्छ।
• रत्ना पाठक शाह – लिपस्टिक अन्डर माइ बुर्का
बलिउड फिल्म ‘लिपस्टिक अन्डर माइ बुर्का’ ले आफ्नो रिलिज भन्दा पहिले नै निकै चर्चा र विवाद आफ्नो पोल्टामा पारेको थियो। यो फिल्म चार महिलाहरुका बारेमा छ, जो आफ्नो सेक्सुअलिटी एक्स्प्लोर गर्छन्। यस फिल्ममा अन्टीको भूमिकामा रत्ना पाठक शाहलाई हस्तमैथुन गरेको देखाईएको छ । अन्टीको यौन इच्छा पूरा नभए पछि उनले एक युवकसँग फोन सेक्स गर्न सुरु गर्छन्।
• कल्कि कोचलिन – मार्गारिटा विथ अ स्ट्र
फिल्म ‘मार्गारिटा विथ अ स्ट्र’ मा कल्किलाई हामी सबैले सेरिब्रल पल्सी (Cerebral palsy) यानी मस्तिष्क पक्षाघात जस्तो बिमारीसंग संघर्ष गरिरहेको देख्न सकिन्छ। यस फिल्ममा कल्किलाई पनि हस्तमैथुन गरेको देखाईएको थियो।
• इन्दिरा वर्मा – कामसूत्र
नाम बाट नै प्रष्ट हुन्छ कि यो फिल्म सेक्स र त्यस सँग सम्बन्धित अलग-अलग कुराहरुका बारेमा हो। यस फिल्ममा महिलाहरुले आफ्नो सेक्सुअलिटीलाई अलग-अलग तरिकाबाट प्रयोग गरेको देखाईको छ। फिल्ममा माया जे चाहन्छिन्, त्यो उनले सेक्सुअलिटीबाट पाउँछिन् र हस्तमैथुन पनि गर्छिन्। यसको साथै उनी आफ्नो साथी तारालाई पनि हस्तमैथुन गर्न सिकाउँछिन्। त्यस पछि तारा पुरुषहरुलाई मैथुनको लागि प्रयोग गर्छिन्।
प्रकाशित : आइतबार, असार १०, २०७५१९:५१
जोन अब्राहमका यी ५ फिल्म जसले बक्स-अफिसमा सबैभन्दा बढी कमाई गरी धूम मच्चायो
अमेरिकी दुतावासद्धारा जावलाखेलमा बृहत कन्सर्ट, सन्ध्या देखि कार्टन क्रु सम्म (पुरा जान्नुहोस्)
यसकारण अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले साई बाबालाई चढाईन् सुनको मुकुट!
भुवनको साथमा जियाको दशैँ (हेर्नुहोस तस्विर)
मध्यरातमा ड्रग्स सहित पक्राउ परिन् यी अभिनेत्री !
‘इन्टु-मिन्टू लन्डनमा’ मा साम्राज्ञी र धिरजको रोमान्टिक अवतार [टिजर भिडियो]